ကွီးဒျေါစုသို့ ပေးစာ | Zizawa's refuge
မတရားတဲ့ အမိနျ့အာဏာ ဟူသမြှ ဖီဆနျကွဆိုတဲ့ ကွှေးကွျောသံကို အာပေါငျအာရငျး သနျသနျ ကွှေးကွျောခဲ့ပွီး သကာလ နှဈနှဈဆယျမြှ ကွာသောအခါ ဒီခြုပျခမြာ ပါတီ မသရေေးအတှကျ ဘာမဆို လုပျမယျဆိုတဲ့ အဆငျ့ကို ရောကျနပေါပကောလား။ ဘာမဆို လုပျမယျဆိုတဲ့ စကားက ကွောကျဖို့ ကောငျးပါ တယျလေ၊ နောကျပွီး ဒါက ကိုယျ့ own tune ဖွဈနတေယျ။ ဘာမဆို လုပျမလုပျတော့ မသိသေးဘူး၊ ဒါပမေယျ့ ဇျောဇေျာ့ ဘောပှဲဆီသှားပွီး ဘောပှဲ လကျခြာတော့ သှားယူပွီးသှားပွီ။ ဟိုးလှနျခဲ့တဲ့ နှဈနှဈဆယျကြျောက ဘီဘီစီက ဉီးအောငျမွငျ့ထှနျးက ဗိုလျစောမောငျ နဝတနဲ့ ဒီခြုပျ အနအေထားနဲ့ပတျသကျပွီး ‘ဒီတော့ ဘောလုံးက ခုဘယျဘကျမှာလဲလို့’ မေးတော့ ‘ကမြက ဘောလုံး အကွောငျး နားမလညျဘူး’ ဆိုပွီး ဘုကလနျ့ ပွနျဖွဖေူးတာ အမှတျရမိတယျ။ ခု ဇျောဇေျာ့ဆီက ဘောလကျခြာ လာယူတော့မှပဲ ဒျေါစုနှယျ ဘောစညျးကမျး နားလညျဖို့ ဘာ့ကွောငျ့ နှဈနှဈဆယျ စောငျ့ရသလဲဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျမိတယျ။
ခုထိတော့ ဘာမဆို လုပျတဲ့ အဆငျ့ မရောကျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဟိုဟာ ကောငျးနိုး၊ ဒီဟာ ကောငျးနိုး လုပျမိလုပျရာ လုပျနပေုံရတာတော့ အသအေခြာပဲ။ ဧညျ့သညျကို စဈမှနျတဲ့ စတေနာနဲ့ ဧညျ့ခံခငျြပမေယျ့ ဟငျးမခကျြတတျတော့ ဟိုဟာလေးခပျလိုကျ၊ ဒီဟာလေးခပျလိုကျနဲ့ နောကျဆုံး ဟငျးအိုး ပကျြကိနျးဆိုကျမဲ့ပုံ မွငျနမေိတယျ။ ကဲပါလေ စကားတနျဆာဆငျနတောတှကေို အသာထားပွီး ပွောခငျြတာပွောပါမယျ။ ပွောခငျြတာထကျ မေးခငျြတာလို့ ပွောရငျ ပိုမှနျမယျ။
နပွေညျတျော စဈအုပျစုက သူတို့ ရညျမှနျးတဲ့ အနာဂတျ မွနျမာ့ နိုငျငံရေးမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ဒီခြုပျကို နရောပေးဖို့ လုံးဝ စိတျကူးမရှိပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံမှာ စဈအုပျစုက သူတို့သဘောထား အစဈအမှနျကို အတိအလငျး ထုတျဖျော အသိပေးပွီးသားပဲ။ နိုငျငံတကာက ဖိအားလညျး ခုထကျ ကိုယျ့ဘကျမှာ ပိုပွတျပွတျသားသား ရှိနခြေိနျ၊ နောကျ ဘုနျးကွီးတှေ အသခေံ လမျးပျေါထှကျလာပွီး သူတို့ လုပျဆောငျနတောကို ကနျ့ကှကျ အရေးဆိုတုနျးကတောငျ မမှုခဲ့တဲ့ စဈအုပျစုက ကနလေို့ ယနျးကီးတှေ ရှလေမျး ငှလေမျးဖေါကျဖို့ အားသနျနခြေိနျ၊ ဒီခြုပျတောငျ တရားဝငျ ပါတီအဖှဲ့အစညျး အဖွဈ မရပျတညျနိုငျတော့တဲ့ အခြိနျ၊ ကြားသနားမှ နှားခမျြးသာရမယျ့ ဘဝကို ရောကျနခြေိနျမှာ သူတို့ စဈအုပျစု လကျတဆုပျစာ ကောငျးစားရေး ဖှဲ့စညျးပုံကို ပွငျပေးဖို့ ခြော့မော့ တောငျးဆိုတာကို အရေးစိုကျမယျလို့ ဘာ့ကွောငျ့ ယုံကွညျရသလဲ။
တကယျတော့ စဈအုပျစုက အနာဂတျ နိုငျငံရေးမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို နရောပေးရငျတောငျ သူတို့ရဲ့ စဈကြှနျသကျရှညျရေး စီမံကိနျးမှာ အဖွညျ့ခံ အဖွဈ အသုံးတညျ့လိုတညျ့ငွား သုံးဖို့လောကျသာ စဉျးစားတာပဲ။ အစကတော့ စဈအုပျစုက နဝေငျမောငျတို့လို့ ခြီးထုပျတှေ၊ တတိယအုပျစုလို့ နံမယျ ပေးထားတဲ့ အငျအားစုတှကေို ဟနျပွ အတိုကျအခံအဖွဈ တငျပွီး ဒီမိုကရစေီ အငျထုရေး စီမံကိနျးကို ဖျောဖို့ကွိုးစားကွညျ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွညျသူ လူထုက ဒီကောငျတှကေို လုံးဝ နရော အယူမခံဘူး။ ဒီတော့ တတိယအုပျစုတှကေို ဒျေါစုကို အစားထိုးလို့ ရလိုရငွား ကွိုးစားကွညျ့တဲ့ ပွညျပက အမရေိကနျတို့၊ အီးယူတို့လညျး တဘကျက ဒီမိုကရစေီ အတငျးအျောနပွေီး တဘကျက လူထု ခဉျြတဲ့ကောငျတှကေို တငျဖို့ စီမံကိနျးကို လကျလြှော့လိုကျပုံရတယျ။ ဒီတတိယအုပျစု အတိုကျအခံ အတုကို ပွညျသူလူထု အမြားစုကွီးကက ပွတျပွတျသားသား ဆနျ့ကငျြပွနိုငျတာမို့ ဒီအထိ ပွညျသူလူထုက တာဝနျကတြေယျ။ အတိုကျအခံအတုလို့ လူထု မွငျနတေဲ့ အုပျစုနဲ့ စခနျးသှားလို့ မရတော့ လူထုက သူတို့ကို တကယျကိုယျစားပွုတယျလို့ သတျမှတျထားတဲ့၊ သှားမရှိတဲ့ကြားဘဝ ရောကျနတေဲ့၊ ပါတီ မဖကျြရငျတျောပါပွီ၊ ဘာလုပျရ လုပျရ လုပျပါ့မယျလို့ ပါးစပျက ထုတျမပွောပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာ ဒီပုံစံအတိုငျးသှားနတေဲ့ ဒျေါစုနဲ့ ဒီခြုပျကို စဈအုပျစုက သူတို့ စီမံကိနျးအတှကျ အသုံးတညျ့မယျလို့ တှကျမိနိုငျစရာ ရှိတယျ။ ငါးကွငျးဆီနဲ့ ငါးကွငျးကွျောတယျပဲ ချေါချေါ၊ ဒျေါစု ပွောနတေဲ့ ဒီမိုကရစေီ အငျထုရေး စီမံကိနျး ပီပွငျအောငျ အဓိက ဇာတျကောငျဖွဈတဲ့ ဒျေါစုနဲ့ ဒီခြုပျကို ရကျရကျစကျစကျ ဝငျအသုံးတျော ခံခိုငျးတာပဲ။ အဖွညျ့ခံ ဘဝနဲ့ လှုပျရှားနရေတာကို တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးအတှကျ တခုခု လုပျနတောပါလို့ ပွောနတောဟာ (တိုငျးပွညျအတှကျ အသုံးခြ ခံရတယျဆိုရငျ ခံမှာပဲဆိုတဲ့ သဘောသကျရောကျတဲ့ အပွော ပွောခဲ့တယျ မလား။) တကယျကို အဲ့သလို ယုံကွညျလို့ ပွောနသေလား၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့လုပျရပျကို ကိုယျတတျနိုငျသမြှ ကွိုးစား တရားထူထောငျ နတောလား။
ခုဆိုရငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ လှတျတာ တနှဈပွညျ့တော့မယျ။ ဒီတနှဈ အတှငျးမှာ ဒီခြုပျဘကျက ဘယျလို အကြိုးအမွတျတှေ ထှကျခဲ့သလဲ၊ ဘာတှေ ပေးဆပျလိုကျရလဲဆိုတာ ပွနျကွညျ့ဖို့ ကောငျးတယျ။ စဈအုပျစုက ပိုတောငျ အခွကေလြာ၊ ကိုယျ့က သူတို့ လိုသလို ကစားပေးနရေတဲ့ အဖွဈကနေ တကျမလာဘဲ တဘကျမှာ ကိုယျ့ကို တငျးပွညျ့ ကပျြပွညျ့ ထောကျခံခဲ့သူတှဆေီက ထောကျခံမှုက အရငျကလောကျ မပွတျသားတော့တာသာ အဖတျတငျ ကနျြခဲ့တယျ။ တခုတော့ ရှိတယျ၊ ဗမာတှထေဲမှာ ဒီခြုပျကို မကျြစိမှိတျ ထောကျခံရုံ၊ အမစေု ဘာလုပျလုပျ ထောကျခံတယျ ပွောရုံနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ နိုငျငံရေး တာဝနျကပြွေီလို့ ခံယူ ထားတဲ့ လူတှတေော့ ရှိတယျ။ ဉီးနှောကျ အလုပျလုပျပုံမရတဲ့၊ ကိုယျလကျခံထားတဲ့ အရာတခုကို သတ်တိရှိရှိ မစဈကွောရဲတဲ့၊ ဒါမှမဟုတျ ဒါမြိုးစဈကွောရမှာ ပငျြးတဲ့ လူစားမြိုးတှဆေီကတော့ ထကျထကျမိုးဉီးကို ထောကျခံသလို ထောကျခံမှုမြိုး ဆကျရနအေုံးမှာဘဲ။ ဗမာပွညျမှာ လူတခြို့အတှကျက နိုငျငံရေး တာဝနျကမြေကကြေို စဈတမျးကောကျတဲ့အခါ box-ticking လုပျသလို လုပျပွီး သတျမှတျနသေူတှေ အမြားကွီးပဲ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ထောကျခံတယျ၊ တရုတျကို ဆဲတယျ၊ ခွလေေးခြောငျး ကောငျးတယျ ခွနှေဈခြောငျး မကောငျးဘူး၊ အမရေိကနျ ဘာလုပျလုပျ ကောငျးတယျ၊ တရုတျ ဘာလုပျလုပျ မကောငျးဘူးလို့ လှနေံဓားထဈ မှတျပွီး အမစေု၊ အမစေုနဲ့ အျောနရေရငျကို ကိုယျ့နိုငျငံရေး တာဝနျကပြွေီလို့ ခံယူထားသူတှေ အမြားကွီးပါ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကိုယျတိုငျက ပွညျသူလူထုကို သူ ဘာလုပျလုပျ သူ့ကို ထောကျခံမယျ့ ပရိသတျ အဖွဈသာ အလိုရှိတယျ ဆိုရငျတော့ သူနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ပွညျသူလူထုကိုပဲ ရမှာဘဲ။ ဒီလိုပွောတာ ဒျေါအောငျဆနျး စုကွညျကို စုံကနျဖို့ ပွောတာမဟုတျဖူး။ ကနခြေိ့နျထိ သူ့ကို ဗမာပွညျသူ လူထုရဲ့ ခေါငျးဆောငျ အဖွဈ သတျမှတျထားဆဲပဲ။ သူဟာ ဗမာပွညျသူလူထုပျေါ စတေနာရှိတယျ ဆိုတာကိုလညျး ယုံပါတယျ။ ပွညျသူလူထုကို ရဲဘျော ရဲဘကျ အခငျြးခငျြး သစ်စာဖောကျမယျ့လူ မဟုတျဖူး ဆိုတာလညျး ယုံတယျ။ နောကျ သူတယောကျထဲ လုပျလို့ မရဘူး၊ ဒီမိုကရစေီ တကယျလိုခငျြသူတှေ အားလုံး ဝိုငျးလုပျမှ ရမယျလို့ ပွောတာကိုလညျး သဘောတူတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဘကျမှာ သူ့ဘကျက ပွညျသူလူထု ကိုးစားလောကျတဲ့ ဉာဏျ အမွျောအမွငျနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ ခေါငျးဆောငျ ပီသအောငျ နပွေဖို့ အရေးကွီးတယျ။ ဇျောဇေျာ့ဆီ ဘောလုံးပှဲ သှားကွညျ့ဖို့ ဘယျလို စဉျးစား ဆုံးဖွတျတယျဆိုတာ နားလညျလို့ မရဘူး။ သူ့ဘကျက ဘယျလို မြှျောလငျ့ခကျြ တှနေဲ့ သှားလဲဆိုတာ သူပဲ သိမှာပဲ။ စဈအုပျစုနဲ့ အဓိပ်ပါယျ ရှိရှိ ဆှေးနှေးနိုငျဖို့နဲ့ ဇျောဇျောဆီသှား အသုံးတျောခံတာ ဘယျလို ဆကျစပျမှု ရှိလဲဆိုတာ မေးဖို့ ကောငျးတယျ။ ဒီလို သှားတာကို သူ့ကို ထောကျခံတဲ့ ပွညျသူလူထု စိတျထဲ ဘယျလို ရှိမလဲဆိုတာကို စဉျးစားရဲ့လား။ ဆီနိတျတာ ခငျရှကေ သူ့မွရိပျညိုမှာ အနှိပျသမလေးတှကေို ဘယျသို့ ဘယျပုံ အလုပျအကိုငျ ဖနျတီးပေးနတေယျဆိုတာကို လာကွညျ့လှညျ့ပါဆို သှားကွညျ့ အုံးမှာလားဆိုတာ မေးပါရစေ။ (ဒျေါစု ကိုယျတိုငျ အထအေ့ငေါ့လေးတှေ သုံးတတျတော့ ကိုယျ့ကို အဲ့သလို ထလေုံ့း ငေါ့လုံးလေးတှနေဲ့ မေးလာရငျလညျး ဗှမေယူလောကျဖူးလို့ ထငျပါတယျ။) နောကျ ဒျေါစုကို ဝဖေနျတယျဆိုတာ နိုငျငံရေး ခေါငျးဆောငျလို သဘောထားလို့ ဝဖေနျတာပဲ။ မကျဒေါနားလို မွငျရငျ ခုလို ဝဖေနျစရာ မရှိပါဘူး။
ပါတီတညျမွဲဖို့ အရေးကွီးတယျဆိုတာကို လကျခံ သဘောတူပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အငျအယျဒီဟာ ဘယျလို values တှကေို ကိုယျစားပွုထားသလဲဆိုတာကို မေးပါရစေ။ အဲဒိ values တှေ ပြောကျပွီး သကာလ ဒီ values တှကေို ကိုယျစားပွုဖှဲ့ထားတဲ့ အဖှဲ့ကွီး ဆကျရှိနတေယျဆိုတာ အဓိပ်ပါယျရော ရှိပါသေးရဲ့လား။ (တကယျက တီတီစု တီတီစု သားတို့ မသိလို့ မေးပါရစေ။ လှတျလပျမှုအတှကျ လှတျလပျမှုကို စတေးမလား၊ အဲ့သလို စတေးတာ မှနျသလားလို့ မေးခငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီမေးခှနျးက မလိုအပျပဲ မကျတာဖဈဆဈကယျ ဖွဈတော့ ဖီလျောဆျောဖီ သောကျမွငျကပျတဲ့ ပရိသတျကို ထောကျခငျြ့ပွီး မမေးတော့ပါဘူး။) လှခှေကျ ခညျြးကနျြ အလံမလှဲစတမျး တိုကျမယျဆိုတဲ့ စိတျဓာတျကိုတော့ အပွတျ လေးစားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တိုကျတငျးနဈ အရှယျအစား ရှိခဲ့တဲ့ သင်ျဘော ကွီးကနေ လှခှေကျလေးပဲ ကနျြတဲ့ ဘဝ ရောကျသှားရတာမှာ မာလိနျမှုးတှကေို ပေးခငျြတဲ့ အကွံကတော့ မကျခီယာဗယျလီကို ပွနျသာဖတျပါလလေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒျေါစုက ပွညျသူလူထုဆီက သူတို့ ဘာလုပျလုပျ ထောကျခံတာမြိုးသာ လိုခငျြပုံရပါတယျ။ တကယျတမျးမှာ သူအားကိုးပုံရတာက အနောကျအုပျစုက ပေးတဲ့ ဖိအားပဲ။ အဲဒိဖိအားနဲ့ ဒီမိုကရစေီရမယျလို့ တကယျယုံခဲ့ပုံရတယျ။ ဒါကြုပျအမွငျပါ။ မှားခငျြလညျး မှားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခု သူအားကိုးခဲ့တဲ့ ယနျးကီးတို့ ကိုယျတိုငျက သူ့အတှကျ ရှေးစရာ လမျးကွောငျးတှကေို တခုပွီး တခု ပိတျနတေော့ ခမြာ လုပျမိလုပျရာ လုပျသလို ဖွဈနပွေီ။ နပွေညျတျော စဈအုပျစုက အရပျသား အစိုးရ နံမယျ ခံရုံခံတာကို ယနျးကီးတို့ မသိဘဲ ဘယျနမေလဲ။ ဒါပမေယျ့ စဈအုပျစုနဲ့ အတငျးလုံးခငျြတော့ တိုငျးပွညျထဲ တကဲ့ အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈနတေဲ့ပမာ ဒျေါစုကိုပါ သူတို့ အကဲဖွတျခကျြကို အတငျးအကွပျ လကျခံခိုငျးပုံ ပေါကျနတေယျ။ ဒီတော့ ဒီခြုပျ အနနေဲ့ ဒါကိုလကျခံမယျ၊ လကျမခံဘူးဆိုတာ ပွတျပွတျသားသား တခုခု ပွောပါ မေးလာရငျ ဘယျလို ဖွမှောလဲဆိုတာလညျး သိခငျြပါတယျ။
ကဲ ဒီလောကျပါပဲ ဂြီးဓျေါစုရေ။
« လုပျရပျတခု ကောငျးမကောငျး ဘယျလိုတိုငျးမလဲ။
17 thoughts on “ကွီးဒျေါစုသို့ ပေးစာ”
ဒီပေးစာကတော့ ဒီအချိန်မှာ အင်မတန်ရေးသင့်တဲ့ ပေးစာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ပြီး မကြာခင်က ကိုဝတုတ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ …. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် လေလှိုင်းကြားမှာ ဖြေချင်ရာဖြေ ကြီးကြီးမေ လုပ်နေတယ်၊ သူ့ဘေးမှာ အကြံပေးထောက်ပြမယ့်လူ မရှိဘူးလား…. ဆိုတာကစလို့ ဒီကနေ့ သူနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်အပေါ် အမြင်သဘောထားမှာ ကျနော့်အမြင်နဲ့ တော်တော် တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။
(စကားမစပ် ရှေ့က ပို့စ်နှစ်ပုဒ်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်။)
Posted by Ko Paw | 15/09/2011, 14:50
ko paw, you are seekingapartner in crime? 🙂
Posted by zizawa | 15/09/2011, 15:07
I think you should eat shit of Daw Su before critisizing her.
Posted by Aung | 16/09/2011, 10:30
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ‘ သြဂုတ်၂၄ရက် သူ့အိမ်မှာ သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ ဆုံစဉ်က လာမည့် စက်တင်ဘာ တွင် အသက်(၁၉) နှစ်အောက် အာဆီယံလူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို မြန်မာ နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ လာ ရောက်အားပေးရန် ဖိတ်ကြားလာပါက သွားရောက် အားပေးကြည့်ရှုမည်ဟု ပြောကြားသည်’ ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်မိခဲ့ဘူးပါသည်။
သူ မကြာသေးခင် လတ်တလောက ပြောခဲ့မိသည့်အတိုင်း – ဖိတ်ကြားခံရ၍၊ ကိုယ့်မြေးအရွယ်လေးတွေ(U19)က တခြားနိုင်ငံက အားကစားသမားများ နှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည့်ပွဲ သွားရောက်အားပေးကြည့်ရှုသည်မှာ မလျော်ကန်ဟုမထင်ပါ။ ထိုပွဲသည် လေဖြင့်သာတည်ဆောက်ယူ လေထဲကန် နိုင်ငံရေးဘောလုံးပွဲ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာ့ပြည်တွင်းကိစ္စကို ပြည်တွင်းမှာ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်နေသောသူ မို့ ပြည်သူတွေက ချစ်ခင်လေးစားတာ ခံရတာပါ။
မြန်မာပြည်သူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ဟိုးအယင် (ယခင်) နေ့စဉ်ထုတ် ဟာသသတင်းစာထဲ ပါတတ်တဲ့ ဖေကံကောင်းနဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့ ဆောင်းပါးပျက်တွေ ဖတ်ဘူးသလို၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ ဘေးထိုင်ဘုပြော စာတွေနဲ့လည်းယဉ်ပါးကြပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် လုပ်နိုင်တာ ပြည်တွင်းက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသာ ဖြစ်တာမို့ သူတို့ကိုအရင် ဒီမိုကရေစီအကြောင်း၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေအကြောင်း နားလည်လာအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံမှာတောင် စစ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကို အင်္ဂလန်က ကိုင်ထားပြီး ၊ ဝေလနယ်၊ စကော့တလန် နဲ့ အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းတို့က ကျန်တဲ့အပိုင်းမျှ- ကိုယ့်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး/ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ကို သူ့ပါလီမန်နဲ့သူလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုကနေမှ နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို ပါလီမန်အိမ်တော်များမှာ အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေး မဲခွဲဆုံးဖြတ်တာပါ။
ဘေးကနေထိုင်ပြီး ဝေဖန်ပြရရုံဆိုရင် – ယူကေမှာလည်း မြန်မာ့အရေး ကမ်ပိန်းဖွဲ့ ထထအော်နေ လုပ်နေတဲ့ မျက်နှာဖြူပိုင်အဖွဲ့ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံရေးကို ကုမ္ပဏီဖွဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ၊ လုပ်ခလစာတွေယူ လုပ်လာတာ ဆယ်စုနှစ်ကျော် နေပါပြီ – အဓိကထားပြတာက လူနည်းစုအရေး ကို တန်းတူညီမျှခွင့် ကြိုးပမ်းမှု နဲ့လူ့အခွင့်အရေးပါ (သူတို့ရရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီဝင်ငွေ (စပွန်ဆာIncome)တွေကို မြန်မာ့အရေးထောက်ပံ့ကြေးတွေမှာ အနည်းအကျဉ်း သုံးပါတယ်၊ သူတို့ထုတ်ယူသွားတဲ့ လစာတွေ (Salary Expenses) နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆို သိသာပါတယ်။ ) လေကန်ဝေဖန်ရေးကတော့ လုပ်ရရေးရ လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပြည်ပရောက်နေတဲ့သူတွေ – ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ ရင်းနှီးထိတွေ့ခွင့် ရနေတဲ့သူတွေဘက်ကလည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေ၊ ဆွေးနွေးထောက်ပြချက်တွေ လုပ်ပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
Posted by Nan | 16/09/2011, 11:14
Posted by Ko Paw | 17/09/2011, 03:44
ကိုယ်မြင်တာကို မြင်သလို ထောက်ပြဝေဖန်ပေးနိုင်မယ့်သူတွေရှိတာ ဒေါ်စုအတွက် ကျေနပ်မိပါတယ်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ဒေါ်စုလုပ်သမျှ ခေါင်းညိတ်ယုံတာထက်စာရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာကို အခုလို ထုတ်ရေးတာက ဒေါ်စုကို ကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
Posted by ကြာပီ | 17/09/2011, 05:44
ငါဘာကောင်လဲ ဘယ်လောက်အဖြစ်ရှိလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံးပါ။ လုပ်နိုင်ရင် သူများကိုဝေဖန်မနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ထလုပ်ကြည့်လုိုက်လေ။ ငါ့အကောင်ဝတုတ် ထိုင်နေတာ အကောင်းသား ထသွားမှခွေးမှန်းသိနေမယ်နော်။ ဟဲဟဲ.
Posted by Man of man | 19/09/2011, 13:50
အမေစု ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်တာကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေ
ခင်ဗျားရဲ့ရင်မှာ မကိန်းအောင်းသ၍ ခင်းဗျား ဒီမိုကရေစီ
ကောင်းမြတ်သူသည် ပူပင်သောကမှ ကင်း၏။
ရဲရင့်သူသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ ကင်း၏။
သေးနုပ်သူသည် အစဉ်အမြဲ စိတ်ဆင်းရဲရ၏။
အဲ့ဒါလေးကိုအလွတ်ရအောင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ တိုးလာပါလိမ့် အကိုဝတုတ်ရေ။
Posted by nanshin81@gmail.com | 19/09/2011, 14:46
Don’t pretend to be wise by using words like ‘meta-physics’,’Machiavelli’ etc.
FYI and reality check,she’d studied Philosophy, Politics and Economics at Oxford
WAY before you could barely recite the 26 alphabets. Period.
Who are you anyway,to say utter rubbish,sarcastic and pessimistic views. If you,
by any chance happen to be an academic,discuss matters with dignity,
not like street hooker entertaining themselves with gossip.
You can’t even see why watching the football match isabig deal to talk about.
It can be any reasons,just appreciating sport,courtesy to invitation,causal public
Politics,on the other hand,is deep water and,suffice to say that most people like you can talk the talk,but not walk the walk.
Posted by The offended one | 19/09/2011, 15:16
Posted by The offended one | 19/09/2011, 15:17
ကျွန်တော်သိသလောက်လေး ဝေဖန်ကြည့်မယ်။ ခင်ဗျာဟိုအော်ဒီအော် အော်နေမယ့်အစား ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ထလုပ်ကြည့်ပါလား။ ဟိုက ခင်ဗျားထက်တော်လို့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်၊ သူအဓိကလုပ်ရမှာ ဘာလဲဆိုတာ သူသိတယ်၊ ခင်ဗျာအိမ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေရင် ကောင်းလား။ ခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲ။ စဉ်းစားပါ အထုံးလိုက်မစားပါနဲ့။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်အရင် သာအောင်လုပ်မလား နာအောင်လုပ်မလား။ ဒီအချိန်မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ။ ခင်ဗျာ ကိုမေးကြည့်မယ်ဗျာ။ reply လေးပြန်လိုက်စောင့်နေမယ်။
Posted by ပြည်သူတစ်ဦး | 19/09/2011, 16:29
ဒီလို ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ပြီး ရာဇ၀င်ဘီး တစ်ပတ်လည်လာသည်ဟုပင် ထင်မိတယ်။ ဂျပန်ပြေးအပြီး အင်္ဂလိပ်ပြန်အ၀င်မှာ ဗိုလ်ချုပ်က ဖဆပလကိုခေါင်းဆောင်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ကြိုးပမ်။ အစက အတိုက်အခံအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်ထံ ရာထူးမယူမူဖြင့် လှုပ်ရှား။ နောက်တော့ ဘုရင်ခံအစိုးရအဖွဲ့မှာ ရာထူးယူလိုက်ရော။ ဝေဖန်သံများ ညံခနဲတက်လာတယ်။ ထိုအချိန်က ရုရှကွန်မြူနစ်နောက်လိုက် တစောက်ကန်း ကွန်မြူနစ်များ၊ ပတ်မကြီးထိုးဖောက်လိုသည့် သခင်ထွန်းအုပ်၊ သခင်ဗစိန်လို လူများ၊ အသံအဆူညံဆုံးဖြင့် ဝေဖန်ကြတယ်။ တစောက်ကန်း မြန်မာကွန်မြူနစ်များက လက်နက်ကိုင်ပြီးတိုက်မှ လွတ်လပ်ရေးစစ်မှန်သည်ဟု နိုင်ငံရပ်ခြား အသံများကို နားထောင်ပြီး ယုံကြည်နေကြတယ်။ သခင်ဗစိန်တို့က မနာလိုလို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က လူထု အသက်သာဆုံးဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို အရယူဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဘယ်သူတွေမှားပြီး ဘယ်သူတွေမှန်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်တွေ ခေတ်တွေ ၊ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ဘက်မတူတာတွေ၊ ပြည်သူတွေ ပါဝင်မှု၊ အားပေးထောက်ခံမှု……စသည့် များပြားလှတဲ့ ကွာခြားချက်တွေက ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်စုကို စည်းခြားထားပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒေါ်စုက တကယ်တော့ အသက်သိပ်ကြီးသွားပြီ။ ဒီလောက် အသက်ကြီးလှတဲ့ အဖွားကြီးကို လူထုတိုက်ပွဲတွေ ဘာတွေလုပ်ဖို့ ပြောနေတဲ့ အရွယ်ကောင်း နိုင်ငံရေး သုခမိန်များကို ကြည့်ပြီး အားတက်မိမလိုတောင် ဖြစ်ရပါတယ်။သူအလုပ်လုပ်နိုင်ရင် အလွန်ဆုံး ၄ – ၅ နှစ်ပေါ့။ ဒေါ်စုမရှိတော့တဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအကြောင်း စိတ်ကူးပြီး ဆောင်းပါးလေးများ ရေးသားကြစမ်းပါ။ တပိုဒ်ထက် ပိုမထွက်နိုင်ဘူး။ အားလုံး ပြီးသွားပြီ။
ကျွန်တော်ဒီစာကို နာမည်အရင်းနဲ့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုဝတုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးရင် ကျွန်တော်လည်း နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးမှာပါ။ ကိုဝတုတ်က မြန်မာပြည်ကို ပြန်ချင်မှ ပြန်မှာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်က ပြန်ရဦးမှာ။ ဒီလို ကြောက်လို့ မြန်မာပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်လို့ ၀န်ခံပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ဟာ ကိုဝတုတ်နဲ့ ပုလင်းတူဗူးဆို့ ကိုပေါရဲ့ ဘလောက်ပရိသတ်တဦးပါ။ သူ့ကို ကျောင်းတူဘာသာတူတဲ့ သံယောဇဉ်အရရော၊ သူ့ရဲ့ သတ်တိကြောင့်ရော၊ သူ့ဘလောက်ကို ဖတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါအားပေးထောက်ခံတဲ့ စလုံးက ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလည်း သောက်သောက်လဲရှုံး၊ ပြည်တွင်းကိုလည်း အားမရ၊ ပြန်လည်း မလုပ်နိုင်၊ စိတ်ညစ်ပြီး ကုပ်နေရာကနေ လေနိုင်ငံရေးထလုပ်ပြီး ချက်ချင်းစင်မြင့်ပေါ်ရောက်လာအောင် ဆောင်းပါးတွေရေး၊ နာမည်တော့ ကြီးတာပေါ့ဗျာ။ ငါ ကိုပေါကွ ၊ ဒါငါ့လမ်းစဉ် ၊ ဒီလိုတိုက်ယူရင် ရမယ်ဆိုပြီး လမ်းစဉ်ချပြစမ်းပါ။ ကိုယ်တိုင်သွားလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် ဆိုတာပဲ ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ဆောင်းပါးတွေဖတ်ပြီး ဟိုကြော်ငြာတစ်ခုကို သတိရမိတော့တယ်။ .. ဟိုလိုလုပ်ပါလား…ဒီလိုလုပ်ပါလား …..ငါလည်း မလုပ်တတ်ဘူး…………..။
Posted by dantaryee | 19/09/2011, 18:03
ကလေးဘဝက ဒိုးပစ်တမ်းကစားခဲ့ကြတော့။ ခေါင်ထိမှ အကုန်းလုံးစားရတယ် ( အကုန်ပိုင် တယ် )ထင်ကြတုန်းကိုး…..။ ကလေးအမြင် ကလေးတွေး နဲ့ခေါင်ကိုပဲ လှမ်းပြီး အပစ်မခိုင်းကြနဲ့ လေဗျာ. ။။
Posted by မောင်မိုး | 20/09/2011, 00:32
ကိုဝတုတ်တို့ လို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး
တက်ကြွသူတွေ ကို အမိမြန်မာပြည်က
ကိုဝတုတ်တို့ လိုလူမျိုး ၅၀လောက်ဆို
ဘယ်နှယ့်လဲ ။ပြန်ရဲမလား ကိုယ့်လူ။
Posted by ebawlaw | 20/09/2011, 02:10
ခင်ဗျား ဒီလောက်အမြင်ကျဉ်းပြီး အတွေးတိမ်မှန်း အစက မသိဘူးဗျာ။ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဖန်ချက်ဆွေးနွေးချက်လေးတွေဖတ်ဖူးလို့ ပါ။ တကယ့်အမှန်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ လို ပညာလေးနဲနဲလောက် တတ်သူတွေ ၊ ခုရွေးကောက်ပွဲဝင်အမတ်တွေ ဟာ ဒေါ်စုကို (မသိစိတ်ထဲမှာ) မနာလိုဖြစ်နေတာဗျ။ အသေးစိပ် သုံးသပ်ချက်တွေ မရေးတော့ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့အခုလို ဝေဖန်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းက၊ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေကို ပိုကောင်းစေချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ဟာ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ဘာမှ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေ အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ ခင်ဗျားတို့ အသိဆုံးပါဗျာ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ‘ကြက်ဥအရောင် တိမ်တောင်သဖွယ်ပါ’။ မနာလို ၀န်တိုမှုကို အခြေခံပြီး ဥာဏ်တထွာတမိုက်နဲ့ဆိုရင်တော့ ၊ လဒ လောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျား လောက်တော့ တွေးနိုင် သုံးသပ်နိုင်တဲ့ လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ဘ၀င်မမြင့်ပါနဲ့ ။ ပြည်သူတွေ ဒေါ်စုကို မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ လုပ်ရပ်တွေကို ထောက်ခံနေတာသာ ဖြစ်တယ်ဆို တာ ခင်ဗျား သိထားပါ။
Posted by မောင်ကောင်း | 20/09/2011, 06:03
I regret using what some consider offensive usages in my comment regarding Daw Suu’s appearance atasoccer match. Some readers made known to me their displeasure about these usages, and I accept some of these usages are indeed inappropriate in describing her recent public engagements. Apart from these usages, my opinion about her visit to the soccer match which I tried to express in the article remains unaltered.
Posted by Watote | 22/09/2011, 10:58
“ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ထောကျခံတယျ၊ တရုတျကို ဆဲတယျ၊ ခွလေေးခြောငျး ကောငျးတယျ ခွနှေဈခြောငျး မကောငျးဘူး၊ အမရေိကနျ ဘာလုပျလုပျ ကောငျးတယျ၊ တရုတျ ဘာလုပျလုပျ မကောငျးဘူးလို့ လှနေံဓားထဈ မှတျပွီး အမစေု၊ အမစေုနဲ့ အျောနရေရငျကို ကိုယျ့နိုငျငံရေး တာဝနျကပြွေီလို့ ခံယူထားသူတှေ အမြားကွီးပါ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ကိုယျတိုငျက ပွညျသူလူထုကို သူ ဘာလုပျလုပျ သူ့ကို ထောကျခံမယျ့ ပရိသတျ အဖွဈသာ အလိုရှိတယျ ဆိုရငျတော့ သူနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ပွညျသူလူထုကိုပဲ ရမှာဘဲ။ ”
I saw some readers misunderstand you.
Posted by BINO | 20/11/2011, 16:33